Mawduucyada lagu abuurayo bandhigyo loogu talagalay Mac leh iWork | Abuurista khadka tooska ah
Jose Angel | | Khayraadka, habyaalada
In kasta oo ay u muuqato kaftan, haa, waa tahay loogu talagalay Mac. Interface Tani waxay noqon kartaa wax yar wareer laakiin waxa ugu weyn ee ku saabsan codsigan waa in aan guji kartaa in la furo naqshad kasta oo leh Qoraalka xafiiska ama sidoo kale leh iWork.
Markaan dooneyno inaan soo bandhigno shaqo, marwalba way adagtahay inaan bilowno naqshadeynta qaab qoraal oo runtii umuuqda mid xirfad leh. Taasi waa sababta aan kuugu keenay qalabkan: Mawduucyada MS Office.
Kuwaani kuwa kale waa qalab waxtar leh oo ku siin doona qaabab badan iyo qaabab kala duwan si loo xalliyo shakiga hal-abuurka ah ee aan dhammaanteen haysanno bilowgii. Si tan loo sameeyo, waa inaad tagtaa App Store oo aad ku qor magaca arjiga mashiinka raadinta (On Mac). Ama si toos ah xiriiriyahan: Mawduucyada MS Office
Markaad soo dejiso waxaad uheli doontaa arrimo aan dhammaad lahayn oo shaqadaada ah. Dabcan, diidmada codsigan waa intaas qaar badan oo ka mid ah ayaa lacag la siiyaa, laakiin waxaa jira tab ururiya dhammaan kuwa bilaashka ah, oo waxaa imanaya waxa xiisaha u leh "jeebabka yaryar".
Codsiga waxaa loo isticmaali karaa labada bog, Dood-wadaag iyo Tirooyin. Waxaa jira tusaalooyin dhammaan barnaamijyadan qiimahoodu u dhexeeyo € 0 ilaa € 1,99. In kasta oo aad sidoo kale dooran karto inaad ku iibsato arjiga buuxa full 39,99 oo aad hesho dhammaanba arrimo weligood.
Kaliya kuma koobna tusaalooyinka, waxaa sidoo kale jira astaamo, qaabab iyo astaamo loo adeegsan karo bandhig. Markaa naftaada waad abuuri kartaa si aad u hesho a moodeel gaar ah.
Waxa ugu fiican ee ku saabsan codsigan waa midkeeda habka khadka tooska ah, sidaa darteed, waqti ka waqti ayaa la cusbooneysiiyaa oo ay ku jiraan arrimo cusub si aad ugu isticmaasho Tani waxay faa'iido u yeelan doontaa inaad cusboonaysiiso shaqadaada oo had iyo jeerna aad wax soo saartid.
Dukaanka App-ka waxaan ka heli karnaa codsiyo badan oo dheeri ah oo u heellan, bilaash ah adeegsi iyo lacag-bixin. Laakiin aniga ahaan, tani waa tan iigu dhameystiran ee aan abid soo maro. Naqshaduhu waa kuwo layaableh waxaana jiri doona shaqo xirfad leh oo faa'iido badan u yeelan doonta bandhigyadaada.
Ma taqaan wax kale oo aad nagula talin karto? Qor faallo waxaanan wadaagnaa waxyaabo!
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Mawduucyada bandhigyadaada ku saabsan Mac
Sawirka 4.1 wuxuu keenayaa isdhexgal dib-u-habeyn ah barnaamijkan naqshadeynta dhijitaalka ah
Brandon Land Artist, Naqshadeeye iyo Sawire